खबर मञ्च, Author at खबरमञ्च - Page 4158 of 4205 खबरमञ्च
You are here: Home > Articles by खबर मञ्च - Page 4158
पैसाको लालचमा डाक्टरले सही छाप बेचेपछि….
By खबर मञ्च / June 15, 2016 / स्वास्थ्य / Comments Off on पैसाको लालचमा डाक्टरले सही छाप बेचेपछि….
यातायात व्यवस्था कार्यालय मेचीमा मोटरसाइकलको लाइसेन्सका लागि आवेदन दिँदा डा. एसके झाले एकै दिन हजारौंको निरोगिता प्रमाणपत्र वितरण गरेको समाचार बाहिर अाएपछि नेपाल मेडिकल काउन्सीलले चिकित्सकहरु सम्मिलित एउटा टोली छानविनका लागि झापा पठाउने भएको छ ।
युरोकप फुटबलमा आज दोस्रो चरणका खेलहरु हुने
By खबर मञ्च / June 15, 2016 / खेलकुद / Comments Off on युरोकप फुटबलमा आज दोस्रो चरणका खेलहरु हुने
एजेन्सी । युरोकप फुटबलमा आजबाट दोस्रो चरणका खेलहरु हुने भएका छन् । आज हुने पहिलो खेलमा समुह बी को रुसले स्लोभाकियासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने छ । खेल साँझ पौने ७ बजेबाट सुरु हुनेछ । पहिलो खेलमा रुसले इङग्ल्याण्डसँग एक एक गोलको बराबरी खेलेको थियो भने स्लोभाकिया वेल्ससँग पराजित भएको थियो । अघिल्लो चरण प्रवेशका लागि दुवै […]
जापानका गर्भनले राजिनामा दिने
By खबर मञ्च / June 15, 2016 / अन्तर्राष्ट्रिय / Comments Off on जापानका गर्भनले राजिनामा दिने
एजेन्सी । जापानको राजधानी टोकियोका गभर्नर योची मासुजोइले व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि सार्वजनिक कोष चलाएको घटना सार्वजनिक भएपछि राजिनामा दिने भएका छन् । गभर्नर योचीले आफ्नो विदा मनाउंदाको खर्च, चित्र किन्न र छोराछोरीलाई कपि किताव किन्दिनको लागि सार्वजनिक कोषको दुरुपयोग गरेको खबर सार्वजनिक भएसंगै बढ्दो विरोधपछि राजिनामा दिन लागेका हुन् । उनले बुधवार जापानी राजधानीको वैठकमा […]
इलाममा राहदानी वितरणबाट साढे तीन करोड संकलन
By खबर मञ्च / June 15, 2016 / समाज / Comments Off on इलाममा राहदानी वितरणबाट साढे तीन करोड संकलन
इलाम । राहदानी वितरणबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय इलामले तीन करोड ७१ लाख ७५ हजार रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सात हजार एक सय ४६ जनालाई राहदानी वितरण गरिएको कार्यालयका नासु प्रकाश न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो । चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म एक हजार आठ सय ३० जनाले काठमाडौंबाट राहदानी बनाउने गरी सिफारिस […]
अपांग बालिका बलात्कार गर्ने व्यक्तिलाई १२ वर्ष कैद सजाय
By खबर मञ्च / June 15, 2016 / समाज / Comments Off on अपांग बालिका बलात्कार गर्ने व्यक्तिलाई १२ वर्ष कैद सजाय
ओखलढुंगा । जिल्ला अदालत ओखलढुंगाले अपांगता भएकी १३ वर्षीय बालिका बलात्कार गर्नेलाई १२ वर्षको कैद सजया सुनाएको छ । जिल्ला न्यायाधीश उद्धबप्रसाद भट्टराईको इजलाशले आरोपित हर्कजीत राईविरुद्ध १२ वर्ष कैद र एक लाख क्षतिपूर्ति तिर्नु पर्ने फैसला गरेको हो । सिद्धिचरण नगरपालिका–२ चुप्लुका ५६ वर्षका राईले गएको फागुन २६ गते बालिका बलात्कार गरेको आरोपमा पीडितका […]
बुधबार ज्येष्ठ नागरिकमाथि हुने दुव्र्यवहार विरुद्धको दिवस मनार्इँदै
By खबर मञ्च / June 15, 2016 / समाज / Comments Off on बुधबार ज्येष्ठ नागरिकमाथि हुने दुव्र्यवहार विरुद्धको दिवस मनार्इँदै
झापा । बुधबार ज्येष्ठ नागरिक दुव्र्यवहार विरुद्धको दिवस मनाईँदै छ । संयुक्त राष्ट्र संघको आह्वानमा सन् २०१२ देखि हरेक वर्षको जुन १५ तारिखमा विश्वभर दिवस मनाउन लागिएको हो । ज्येष्ठ नागरिकलाई बोलेर या नबोलेर गाली, घृणा, वेवास्ता र उपेक्षा गर्नेजस्ता कार्य अपराध भएको भन्दै उनीहरुलाई माया र ममता दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री […]